Wax-u-qabashada: U rog GNU / Linux Distro-gaaga deegaan ku habboon | Laga soo bilaabo Linux
La Wax-qabad Fikrad ahaan farsamo ahaan, waa mowduuc ballaadhan, oo mararka qaarkood adag in la sharraxo, hase yeeshe, munaasabadaha kale waxaa looga hadlay Blog-ka, oo si waafi ah loogu qancay.
Sidaas awgeed, daabicitaankan ayaa looga gol leeyahay in wax looga qabto arrinta xoogaa xagga farsamada ah Nidaamka Howlgalka GNU Linux / BSD, adoo xoogga saaraya inta badan, kuwa yaryar xal software isku dhafan iyaga si ay u fuliyaan shaqadan.
Nidaamyada Hawlgalka Nidaamka: Teknolojiyada la Heli Karo ee 2019
1 Waa maxay Virtualization?
2 Ka-shaqeynta: Codsiyada fudud iyo xirmooyinka la heli karo
2.1.2 Ku rakibida
2.2 Khaanadaha GNOME (Khaanadaha)
2.2.2 Ku rakibida
2.3 Maamulaha Virt-ka
2.3.2 Ku rakibida
2.4.2 Ku rakibida
2.5 Maktabadaha iyo Xirmooyinka la xiriira (kuwa ku tiirsan)
2.6 kuwa kale
2.7 Ogeysiis muhiim ah
Waa maxay Virtualization?
Si kooban, waxaan uga soo qaadan doonnaa fikrad tan post la xiriira hore, si markaa, haddii ay dhacdo cid kasta oo danaynaysa inay rabto ka dib markay akhriso daabacaaddan si ay u sii xoojiso mawduuca, waxay ku hayaan gacanta:
"Xaqiijinta Nidaamyada Hawlgalku waxay aasaas ahaan ka kooban tahay awood u lahaanshaha wadaagista isla Qalabka dhowr Nidaamyada Hawlgalka ee ku shaqeeya hab gebi ahaanba madaxbannaan, laakiin dhammaantood waxay diiradda saaraan fududeynta si ka weyn ama ka yar heerka ugu sarreeya ee ku dhowaad kasta oo OS gaar ah (marti) ama OS bilaash ah ), si loo tijaabiyo iyaga oo aan haysan wadis adag oo adag."
"Dhammaan tiknoolajiyada hadda la heli karo waxay leeyihiin heerar kala duwan oo dhib ah marka la eego rakibiddooda, qaabeynta, adeegsiga iyo helitaanka iyo marin u helidda dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah iyaga inay ka adkaadaan."
Ka-shaqeynta: Codsiyada fudud iyo xirmooyinka la heli karo
Hoos waxaan ku sheegi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee la heli karo iyo / ama codsiyada la isticmaalay ee Nidaamka Howlgalka GNU Linux / BSD, labadaba goobta shaqsiyadeed, taas oo ah, Distros loo isticmaalo ujeeddooyin gaar ah (guri), iyo xirfad-yaqaan, taas oo ah, aagga server-yada ururada iyo shirkadaha.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in liiskan aysan ku jiri doonin kuwaas tiknoolajiyada wax-u-qabashada taas oo u timaada sidii xal isku dhafan, wax-ku-wada-mid ama xal-fure, sida Balanqaad.
VirtualBox waa a Nooca 2 Hypervisor multiplatform, taasi waa, waa inay tahay oo kaliya lagu fulin karaa (rakibi karaa) Marti-bixiye kasta (Kumbuyuutar) nooc kasta oo hadda jira ama duug ah Nidaamyada hawlgalka Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2, iyo OpenBSD.
Leh a wareeg horumarineed oo isdaba-joog ah oo leh furitaanno isdaba joog ah, taas oo ka dhigaysa beddel aad u fiican xalalka kale ee la midka ah, laakiin aad u leh tirada la mahadiyo ee muuqaalada iyo shaqooyinka, Nidaamyada hawlgalka martida ee taageeraya iyo barnaamijyada ay ku socon karto.
Inta badan GNU Linux / BSD Distro ayaa sheegay in arjiga lagu daro keydadka, sidaas, leh kuwa soo socda amar amar badanaa lagu rakibo dhammaantood:
Waxaa xusid mudan VirtualBox in, marka la adeegsanayo codsigan, rakibidda «Ku darida martida» iyo Xirmo Dheeraad ah. Sidaa darteed, tan iyo noocyada kale ee rakibidda, ku habboon ayaa ah in la booqdo waxyaabaha soo socda Xiriirinta rasmiga ah ee VirtualBox. In kasta oo, si aad u sii qoto dheeraato astaamaha qaar ee VirtualBox waxaad booqan kartaa daabacaaddeennii hore ee la xiriirtay:
Khaanadaha GNOME (Khaanadaha)
Guntooyinka GNOME waa codsi hooyo Desktop GNOME, kaas oo loo adeegsado in lagu helo nidaamyo fog ama qaab dalwaddii ah. Khaanadaha ama Khaanadaha, waxay adeegsadaan tiknoolajiyada hufnaanta ee QEMU, KVM iyo Libvirt.
Intaa waxaa dheer, waxay u baahan tahay in processor la jaan qaadi kara nooc ka mid ah qalab-caawinta qalab-caawinta (Intel VT-x, tusaale ahaan); Sidaas darteed, Guntooyinka GNOME ma shaqeynayo CPUs oo leh processor Intel Pentium / Celeron, tan iyo, waxay ka maqan yihiin astaamahan.
Waxaa mudan in la muujiyo Guntooyinka GNOME taasi, waa aalad aad u fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala layliska iyo kuwa ku cusub adduunka Linux, maxaa yeelay kuma jiraan kuwo aad u tiro badan fursadaha qaabeynta kuwaa badanaa la yaqaan oo loo isticmaalo kuwa kale, sida VirtualBox. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato codsigan, ujeedku waa inaad booqato waxyaabaha soo socda GNOME Khaanadaha xiriiriyaha rasmiga ah. In kasta oo, si aad ugu sii qoto dheerto Blog-keena, waxaad booqan kartaa daabicitaankeenii hore ee la xiriira:
Sanduuqa 'Gnome Box' waa aalad u furan furfurnaanta ilaha ficil ahaanta
Maamulaha Virt-ka waa interface isticmaale desktop ah oo loogu talagalay maamulka Maareeyaha Mashiinka Virtual iyada oo loo marayo libvirt. Waxaa ugu horreyn loogu talagalay mashiinnada farsamada gacanta lagu maamulo KVM, laakiin sidoo kale waxay qabataa kuwa ay maamusho Xen y LXC.
Maamulaha Virt-ka waxay soo bandhigeysaa aragti kooban oo ku saabsan socodsiinta domains, waxqabadka tooska ah, iyo tirakoobka ka faa'iideysiga kheyraadka. Saaxiriinyaashu waxay u oggolaanayaan abuuritaanka degmooyin cusub, iyo qaabeynta iyo hagaajinta qoondaynta khayraadka ee aag iyo qalab casri ah. Daawade macmiil VNC y SPICE Isku-dhafan wuxuu soo bandhigayaa konsoleel garaaf ah oo dhammaystiran oo ku saabsan qaybta martida.
Waxaa mudan in la muujiyo Maamulaha Virt-ka in, sidoo kale waa aalad fudud, in kastoo wax badan ka dhammaystiran tahay Guntooyinka GNOMESidaa darteed, waxaa loo tixgelin karaa kuwa dhexdhexaadka ah ama kuwa horumarsan ee heerka koowaad, maadaama ay si fudud awood ugu leedahay inay u oggolaato maareynta wareegga nolosha oo dhan ee mashiinnada dalxiiska ee hadda jira. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato codsigan, ujeedku waa inaad booqato waxyaabaha soo socda Xiriiriyaha rasmiga ah ee Virt-Manager. In kasta oo, si aad ugu sii qoto dheerto Blog-keena, waxaad booqan kartaa daabicitaankeenii hore ee la xiriira:
Qemu-Kvm + Maamulaha Virt-ka ee Debian - Shabakadaha Kombiyuutarada ee SMEs
Qemu waa mashiin guud oo furan oo fure virtualizer iyo emulator, karti u leh socodsiinta nidaamyada hawlgalka iyo barnaamijyada loo sameeyay hal mishiin mashiin kala duwan oo leh waxqabad aad u wanaagsan, isla markaana awood u leh inuu gaaro waxqabadka u dhow asalka asagoo si toos ah ugu shaqeynaya koodhka martida. ka martida loo yahay.
KVM waa xal dhameystiran oo loogu talagalay Linux oo ku saabsan qalabka x86 oo ay ku jiraan kordhinta ficil-celinta (Intel VT ama AMD-V) oo ka kooban module kernel ah oo la qaadi karo, kaas oo bixiya kaabayaasha aasaasiga ah ee farsamaynta iyo moodeel gaar ah. Oo hadda waxay ku shaqeysaa gundhigga Qemu.
Waxaa mudan in la muujiyo Qemu-KVM taas oo waliba ah qalab aad u dhameystiran, maadaama aysan ku dayan oo kaliya balse ay sidoo kale dhaqan galiso, oo ka duwan kuwa kale ee si siman horumarsan sida wmware, taas oo kaliya u oggolaanaysa wax-u-qabashada. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato codsigan, ujeedku waa inaad booqato waxyaabaha soo socda Xiriirinta rasmiga ah ee Qemu-KVM. In kasta oo, si aad ugu sii qoto dheerto Blog-keena, waxaad booqan kartaa daabicitaankeenii hore ee la xiriira:
QEMU 5.1 halkan ayuu joogaa wuxuuna la yimaadaa ilaa 2500 isbadal kuwana waa kuwa ugu muhiimsan
Maktabadaha iyo Xirmooyinka la xiriira (kuwa ku tiirsan)
Xirmooyinkaan 3-dii xirm ee ugu dambeeyay ee la xusay badanaa waxay rakibaan kuwa kale oo laxiriira (laxiriira) sida ku-tiirsanaanta, sidaa darteed, haddii loo baahdo, way rakibi karaan, iyaga oo ay weheliyaan ku-tiirsanaantooda iyo xirmooyinka kale ee muhiimka ah, iyagoo fulinaya amarka soo socda:
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad rakibto mid kale tiknoolajiyada wax-u-qabashada laga heli karaa Linux / BSD waxaad dooran kartaa:
Ku rakibida amarka soo socda:
Ku rakibidda iyada soo socota post la xiriira hore la mowduuca:
Xusuusnow in magaca dhammaan baakadaha halkan ku xusan ay waxyar ku kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran GNU Linux / BSD Distro aad adigu isticmaashay, sidaa darteed haddii aadan shaqeyn rakibidda mid, hubi magaca saxda ah ama u dhigma qaybtaada 'Distro'.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Tecnologías de virtualización» halkan ku xusan, ay sabab u tahay fudeydkeeda rakibidda iyo helitaanka intabadan GNU / Linux Distros; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wax-u-qabashada: U rog GNU / Linux Distro deegaan ku habboon
Waxaan kaliya rabay inaan ogaado in xaqiiqda Gnome Boxes ay shaqeyneyso, ugu yaraan Celeron 3350, oo leh nooca dalabka ee ay bixiso Arch Linux.
Ku jawaab Voider
Salaan, Voimer. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga oo aad ku darsatay khibradaada ku saabsan Gnome Boxes.
samee Bilaha 10
Beddel aad u wanaagsan, oo aan adeegsaday, waa GNU / Debian oo leh Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalka!
Salaan, José Luis. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Aad ayaan ugu faraxsanahay inay kuu ahaatay mid waxtar leh oo ku kobcisay.
GNUnet 0.14 wuxuu la yimaadaa codsi fariin iyo wax ka badan
Google waxay weydiisatay GitHub inay xannibato 135 bakhaarro la xiriira Widevine